केही ट्रायल अझै बाँकी हुँदा नै रुसले कुन आधारमा भन्यो, ‘भ्याक्सिन तयार छ’ ? - हिपमत
रुस संसारको पहिलो कोरोना भ्याक्सिन बजारमा ल्याउनका लागि तयार छ, भलै यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता र सुरक्षामाथि केही विशेषज्ञले शंका गरेका छन् । रुसको भ्याक्सिन माथि शंका गर्नेहरुका अनुसार यो भ्याक्सिनको ट्रायल दुई महिनाभन्दा पनि कम समयका लागि गरिएको थियो र यस्तोमा मानिसहरुका लागि यो सुरक्षित छ भनेर घोषणा गर्न हतार त गरिएको होइन ?
मंगलबार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले कोभिड–१९ को पहिलो भ्याक्सिन तयार गरेको र यसले सबै आवश्यक परीक्षण पार गरेको घोषणा गरे । साथै, यो भ्याक्सिनले कोरोनाविरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता प्रदान गर्न सफल भएको पनि जानकारी दिए । रुसले यो भ्याक्सिनको नाम सोभियत संघद्वारा लञ्च गरिएको संसारको पहिलो उपग्रहको यादमा ‘स्पूतनिक भी’ राखेको छ । यद्यपि, यो भ्याक्सिनले अहिलेसम्म तेस्रो तरणको ट्रायल पूरा गरेको छैन जसमा हज्जारौं व्यक्तिहरुमाथि व्यापक मात्रामा परीक्षण गरिन्छ ।
नयाँ भ्याक्सिन पास हुनका लागि सामान्य रुपमा तीन चरणको ट्रायल पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा निकै कम मानिसहरुमा भ्याक्सिनको ट्रायल हुन्छ र उनीहरुलाई भ्याक्सिनको सिमित डोजमात्रै दिइन्छ । भ्याक्सिनको इम्युन रेस्पोन्स कस्तो छ र भ्याक्सिनका केही साइड इफेक्ट त छैन भन्ने जानकारी पाउनका लागि दोस्रो चरणमा मानिसहरुको संख्या बढाइन्छ ।